Igodo a chọrọ ịkwụsị njikwa niile na ụlọ | Akụkọ akụrụngwa
Igodo a chọrọ ịkwụsị njikwa niile dị n'ụlọ
Smart TV, nke amara nke ọma dị ka Smart TV, abụrụla otu ngwaọrụ anyị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ ụlọ. Typedị ngwaọrụ a na - enye anyị ohere ịnweta ịntanetị ma nwee ọ contentụ na ọdịnaya site na YouTube, Netflix, chọọ ntanetị ... Ma mgbe ọ na - achọ ịgagharị na Internetntanetị, TV dịpụrụ adịpụ na - adakarị ọrụ na Anyị na-ejedebe iji tablet anyị ma ọ bụ smartphone.
Ọ bụrụ na ọrụ nke Smart TV adalata, ọ ga-abụ na ị nwere kọmputa ejikọrọ na telivishọn gị, ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, iji jiri ụzọ igodo ikuku na igwe ojii na-agagharị n’ụzọ ka mma karịa. Ma mgbe ahụ, anyị anaghị ahụ nsogbu ahụ na tebụl ime ụlọ anyị nwere njikwa nke tv, keyboard, òké, njikwa nke DVD-BluRay ọkpụkpọ, otu maka stereo, otu maka satịlaịtị….
Tholọ ọrụ Thomson gosipụtara keyboard, Thomson NXU 3506, nke anyị nwere ike iji hAcer eji ngwaọrụ niile anyị na - enwekarị na ime ụlọ site n'ụlọ anyị, dị ka TV, DVD player, satellite erite, stereo na ọbụna kọmputa, ebe ọ na-integrates a aka pad na nke anyị nwere ike ịkpali òké na uche.
Njikwa a dịpụrụ adịpụ, nke nwere nha 27 x 14 x 3 cm, nwekwara ihuenyo LCD nke e gosipụtara ngwaọrụ ahụ anyị na-achịkwa n'oge ahụ ma nwee ihe dịka 8 mita ma rụọ ọrụ site na infrared. Njikwa keyboard a zuru ụwa ọnụ dị na ụdị dị iche iche maka ụdị Phlips, LG, Samsung, Sony na Panasonic ebe ọ na-enye anyị igodo raara onwe anyị nye maka igwe onyonyo ọ bụla.
Ekele maka mpe mpe akwa emetụtara, anyị nwere ike iji otu nkasi obi nke ahụ keyboard anyị na-eji na-agagharị na ịntanetị na-enyekarị anyị, mana na-enweghị junk ọzọ n'ime ụlọ ahụ. Na mgbakwunye, n'ihi akụkụ ya, o yighị ka anyị ga-efu n'etiti ọdụm dị n'ime ime ụlọ ahụ. Nke a keyboard-njikwa bụ arụpụtara Thomson ma Hama ụlọ ọrụ bụ maka ya ere na nkesa na a ọnụahịa nke 49,90 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igodo a chọrọ ịkwụsị njikwa niile dị n'ụlọ
1492, nke ahụ bụ aha ụlọ nyocha nzuzo nke Amazon